Ndị agha / ndị uwe ojii - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
3D nwughari ohuru-ala mgbe ala ọma jijiji gasịrị
(1) Mweghachi ngwa ngwa nke ọdachi ahụ na-enweghị ọhụụ ọhụụ
(2) Belata ike ọrụ na ihe ọghọm arụmọrụ nke ndị nyocha
(3) Meziwanye arụmọrụ nke nyocha mberede ọdachi ala
3D nlereanya nseta ihuenyo nke Hualien ala ọma jijiji
Na 23:50 na February 6, 2018, ala ọma jijiji nke 6.5 ruru na mpaghara oke osimiri dị nso na Hualien County, Taiwan (24 ° 13 ′ N —121 ° 71 ′ E). Isi ihe omimi ya bu kilomita iri na otu, ma o juru Taiwan dum anya.
Ala ọmajiji ahụ mere na August 3, 2014 na Ludian, Yunnan Province. Ọrụ onyonyo 3D ngwa ngwa nke UAV oblique foto nwere ike weghachite ọnọdụ ọdachi ahụ site na onyonyo 3D, ma nwee ike lelee mpaghara ọdachi ahụ echere na-enweghị akụkụ nwụrụ anwụ na nkeji ole na ole.
Modeldị 3D weghachiri ezigbo ọnọdụ
Mbat-nkume eruba na landlip
(1) Iguzo ihu ụlọ na okporo ụzọ mgbe ọdachi mechara
(2) Nnyocha mgbe ọdachi dakwasịrị nke mbuze
Na Disemba 2015, National Geographic Information Bureau nke Surveying and Mapping wuru 3D nke ezigbo ọnọdụ maka oge mbụ ịmara ọnọdụ ọdachi nke ụlọ na okporo ụzọ na-enweghị nghọta, nke rụrụ ọrụ dị mkpa na mgbe a napụtara.
Modeldị 3D nke apịtị apịtị na Shenzhen
N’abalị iri na abụọ nke ọnwa Ọgọst, afọ 2015, mberede ala mbuba mere na Shanyang County, Shaanxi Province, nke butere ọnwụ ọtụtụ mmadụ. Ala mbuze mere ka odighi aga n’okporo uzo. Foto UAV oblique nwere uru ya pụrụ iche na mpaghara a. N'ihi ụkpụrụ 3D, a ga-arụpụta nnapụta na mkpokọta ala mbuze nke ọma.
Modeldị 3D nke Landslip na Shaanx
3D ezigbo ihe ngosi ụdị nke mgbawa na Tianjin
Ka ọnwa nke asatọ dị na mkpụrụ ụbọchị abụọ n’afọ 2015, ihe ahụ gbawara na mpaghara Tianjin Binhai, wụrụ mba ahụ niile n’anya. N'ime nnukwu ihe gbawara chemical, drones ghọrọ “onye nyocha” kachasị dị irè. Mmiri ahụ abụghị “ụzọ mgbochi” dị mfe, wee mezue ọrụ eserese nke ihe mberede ahụ, wee mee ngwa ngwa ihe atụ 3D dabara adaba, bụ nke rụrụ ọrụ dị mkpa na nsonaazụ nnapụta na nnapụta iwu.
Ihe oyiyi Orthophoto
Realdị ihe ngosi 3D n'ezie
Nchebe mba, ndị agha
(1) Bridge ọwara ewu
(2) Ime atụmatụ obodo
(3) Nyocha nyocha saịtị nke nnukwu ihe
(4) Ọchịchị na-ebuso ndị iro iro
(5) Virtual agha ịme anwansị
(6) Nyocha na mmejuputa iwu nke 3D agha agha
(7) Spacegagharị n’elu mmiri, wdg.